ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကြံပေးချက်များ: ဤအ Follow 10 အလွန်ကြီးစွာသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်စေရန်အကြံပေးချက်များ | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
မည်သို့ကျောင်းဆက်ဆံရေးရုံးဖွစျဖို့ - ဒုက္ခသည်များအတွက်ကောင်းသောပေးဆောင်အလုပ်အကိုင်များ & ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ
သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ရချင်ပါနဲ့? သငျသညျကွီးစှာသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်လိုအပ်ပါတယ်. သင်ယူဖို့ဒီဗီဒီယို Watch 10 အလွန်ကြီးစွာသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်များအတွက်အကြံပြုချက်များ.
ဒါဟာသင်ကြောင်းကိုသင်၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်ဖန်တီးမယ့်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည်, သင်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်, သင့်ရဲ့အရည်အချင်းများ, လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ, သင်အနေအထားများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီကြသည်အဘယ်ကြောင့်ပြောပညာရေးဆိုင်ရာနောက်ခံနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များ.
သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်သူတို့တစ်တွေအလုပ်ဘို့သင့်ကိုလူတွေ့မေးမြန်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ရန်သင့်အားငှားရမ်းစဉ်းစားရန်လိုလျှင်သူတို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာကြည့်ရှုမည်ကိုပထမဦးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်. ကုမ္ပဏီများကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရာပေါင်းများစွာကိုလက်ခံရရှိ. တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုကြည့်ရှုသောအခါ,, သငျသညျအကွောငျးကိုရှိ 10 အဲဒီလူကိုအထင်ကြီးဖို့စက္ကန့်. အလုပ်ရှင်သင်နှင့်မရသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့လိုလားကြောင်း Remeber. နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုအသုံးပွုဖို့သေချာပါစေ “ငါ”, မည့်အစား “ကျွန်တော်တို့”. သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းပြောနေတာဖို့အသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါ. သို့သော်, ဒါကြောင့်အမေရိကအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ဒီမှာပါ 10 သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကို "Good" ကို stack သို့ဝင်သေချာအောင်ကူညီပေးဖို့လုပျနိုငျသောအရာတို့ကို.
သေချာဖတ်ရန်လွယ်ကူသည် Make. သင်၏နာမကိုရဲရင့်ခြင်းနှင့်အလုပ်ရှင်များကိုဖတ်ရှုဖို့အတှကျပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းသင်၏နာမကိုတစ်ဦးကိုတိုဗားရှင်းသုံးပြီးစဉ်းစားပါ. သင့်ရဲ့အလယ်နာမည်မပါဝင်ပါနဲ့, ဒါဟာရှည်လျားသည်အထူးသဖြင့်ပါလျှင်.
2. သင်တစ်ဦး "" အမေရိကန်တို့၏ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်သေချာအောင်လုပ်ပါ.
တခါတလေ, ဒုက္ခသည်များသို့မဟုတ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတစ်ဦး WhatsApp ကိုနံပါတ်သို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရေအတွက်ကိုကိုသုံးပါ. တစ်ဦး U.S ကိုသုံးပါ. ဖုန်းနံပါတ်နှင့် U.S အတွက်စံပုံစံကို အသုံးပြု. ရေး. ဤကဲ့သို့သောဝင်ရသော- ကွင်းအတွင်းဧရိယာကုဒ်, ပထမသုံးဂဏန်း, ထို့နောက်တစ်ဦး dash, ထို့နောက်လာမည့်လေးနံပါတ်များ:
လွယ်ကူသောမှ re-type အမျိုးအစားကိုသုံးပါ, အမေရိကန်အီးမေးလ်လိပ်စာ. ကဲ့သို့သောနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်အဆုံးသတ်ထားတဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုမသုံးပါနဲ့: mohamedhusseinali17352@yahoo.fr အစား, U.S ရိုက်ထည့်ရန်လွယ်ကူသောကိုသုံးပါ. အီးမေးလိပ်စာ. ဥပမာ: mo.ali@gmail.com. နှင့်ဤအီးမေးလ်လိပ်စာကိုစစျဆေးဖို့သတိရ! A ကောင်းဆုံးစိတ်ကူးသင်တို့ရှိသမျှသည်အလုပ် application များအတွက်အသုံးပြုတဦးတည်းကအီးမေးလ်လိပ်စာရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
3. အလျင်အမြန်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လွယ်ကူကြောင်းတစ် layout ကိုအသုံးပြုပါ.
ဒီအရာခပ်သိမ်းကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်သေချာအောင်ဆိုလိုတယ်. သငျသညျတိုင်းဧရိယာများအတွက်တူညီသောပုံစံကို အသုံးပြု. နှင့်သေချာအရာအားလုံးလိုင်းများတက်အောင်ဖွငျ့ဤလုပျနိုငျ. သင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်အခမဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် template ကို Download လုပ်နိုင်ပါတယ် (link ကို add).
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှအတှေ့အကွုံမြားပါဝငျရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာင်. သင်သည်မည်သည့် U.S ရှိသည်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်. လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ, စေတနာ့ဝန်ထမ်းသို့မဟုတ် U.S မှာ interning စဉ်းစားပါ. U.S ရဖို့ကုမ္ပဏီ. အတှေ့အကွုံ. သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့အရည်အချင်းတိုးမြှင့်နှင့်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေါ်ဤအကြောင်းတို့ပါဝင်သည်နိုင်ရန်အတွက်အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းများယူနိုင်ပါသည်.
5. သင်၏ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု Include ပေမယ့်အင်္ဂလိပ်လိုမပါဝင်ပါဘူး
သငျသညျပွောဆိုဆိုဘာသာစကားများစာရင်း, သင်သာမပြောတတ်သို့မဟုတ်သူတို့အားဘာသာစကားများကိုရေးသားလျှင်အပါအဝင်. ဒါပေမဲ့, အင်္ဂလိပ်မပါဝင်ပါဘူး. သငျသညျသငျ့လျြောသောသဒ်ဒါနှငျ့ကောငျးသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရှိခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုကျွမ်းကျင်စွာဖြစ်ကြောင်းပြသ, အရင်းအနှီး, နှင့်ပုံစံ.
အတော်များများကဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတို့အသိုင်းအဝုိင်းကကူညီသည့်နည်းလမ်းများစွာမပါဝင်ပါဘူး. ဥပမာ, ကြှနျုပျတို့သိအများအပြားဒုက္ခသည်များသည်အခြားအသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်ဘာသာပြန်ဆိုလိမ့်မယ်. ဒါဟာသူတို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကပဲကြင်နာဖြစ်ဤသို့ပြုခြင်းနှင့်. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပေါ်စေတနာ့ဝန်ထမ်းဤအမျိုးအစားပါဝင်သည်သင့်တယ်. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မိသားစုကူညီပေးနေကြသောအခါသင်တို့ကိုမပါဝင်သင့်ပါတယ်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပါသည်.
မြို့တော်နှင့်အတူအလွန်သတိထားပါ. သင်အားလုံး Proper noun အမြတ်ထုတ်ရန်သေချာအောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. Proper noun အမည်များနှင့်တူစကား, မြို့ကြီးများ, နှင့်ကုမ္ပဏီများ. သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင်တို့ရှိသမျှအမည်များများအတွက်စာလုံးအသုံးပြုနေသည်သေချာအောင်, သောနေရာများ, ကုမ္ပဏီများမှ. သင်သည်သင်၏အတွေ့အကြုံကဖော်ပြရေးလိုက်တိုင်းကျည်ဆံတစ်ကြိယာနှင့်အတူစတင်သင့်တယ် (လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖော်ပြနေတဲ့စကားလုံး). ဤသည်ကိုဖတ်ရှုဖို့ကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့စေသည်. ဒါဟာအစကသင်၏တာဝန်ဝတ္တရားချက်ချင်းခဲ့ကြသည်ဘာအလုပ်ရှင်ပြောထားသည်.
8. Make သေချာသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုနောက်တဖန်မနှစ်ခုစာမကျြနှာထကျ
သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်သာတစ်ခုတည်းအပိုဒ်အကွာဖြစ်သင့်အပေါင်းတို့နှင့်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုစာမျက်နှာများပေါ်တွင် fit သင့်တယ်. အလုပ်ရှင်များထက်ပိုရှည်သောကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဖတ်မည်မဟုတ်.
9. နောက်ဆုံး, သင့်ရဲ့ဖောင်တစ်ခုလုံးကိုကိုယ်ရေးရာဇဝင်များအတွက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်သေချာအောင်.
သင်ကသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေါ်မှစာသားအားလုံးသေချာဖြစ်စေနိုင်သည်တစ်ခုမှာသေးငယ်ပေမယ့်အရေးကြီးသောအပြောင်းအလဲအတူတူဖောင်ဖြစ်ပါသည်. အကြိမ်ပေါင်းများစွာ, သင်တစ်ဦးကိုယ်ရေးရာဇဝင်လုပ်နေပါတယ်သည့်အခါ, သင်သည်အခြားစာရွက်စာတမ်းမှသင်၏စာသားအစိတ်အပိုင်းများကိုကော်ပီကူးအထူးသဖြင့်လျှင်, ယင်းဖောင်မတော်တဆပြောင်းလဲသွားစေခြင်းငှါ,. ဒါဟာကိုကြည့်ဖို့ကရှုပ်ထွေးစေသည်. သေချာသည်သင်၏ font ကိုအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်အောင်, အမျိုးအစား "ctrl + a" ကို. ပြီးတာနဲ့အပေါငျးတို့သဖောင်၏မီးမောင်းထိုးပြနေသည်, ယင်းဖောင့်နှင့်အရွယ်အစားကိုရွေးပါ. ကောင်းသောနှစ်ဦးကို, သုံးစွဲဖို့ဘုံဖောင့်များမှာ: Times New Roman နှင့် Arial. အနည်းဆုံးအားအရွယ်အစားကိုသုံးပါ 12 ဖတ်ရှုသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်လွယ်ကူအောင် font ကို.
10. တစ်ဦးကို PDF အဖြစ်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင် Save!
သင်တစ်ဦးစကားလုံးစာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်း၏အခြားအမျိုးအစားအဖြစ်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုကယ်တင်ပါလျှင်, ကတက် messed ရစေခြင်းငှါ,. ဒါကြောင့်သင်လုပ်ချင်တဲ့အတိအကျလမ်းကိုကြည့်ရှုမည်သို့မှသာဒါဟာ PDF ဖိုင်အဖြစ်သိမ်းဆည်းဖို့ သာ. ကောင်း၏. လည်း, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာနှုတ်ကပတ်တော်ကို format နဲ့ကယ်တင်ဗားရှင်းရှိသည်သေချာအောင်. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မှတည်းဖြတ်စေရန်ဤဗားရှင်းကိုသုံးနိုင်သည်.
ပညာရေးသင်တစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်လုပ်သားတူအောင်လုပ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်. သငျသညျသင်သည်သင်၏အလုပ်အတွက်သုံးပါလိမ့်မယ်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးရှိရာအရပ်၌သင်တို့ကျောင်းသင်တန်းများယူကြပေမည်. ဒါကြောင့်ပါလျှင်, သင့်ရဲ့ပညာရေးအတွက်သင်တန်းများများ၏အမည်များကိုရေးသား. သငျသညျပိုရှည်သုတေသနစာတမ်းများသို့မဟုတ်သိသာထင်ရှားသောစီမံကိန်းများနှင့်တူညီသောအရာလုပျနိုငျ.
ဘဝအတှေ့အကွုံအဖြစ်ကောင်းစွာစာရင်းပြုစုဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏အိမ်တွင်သို့မဟုတ်န်းကျင်အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ရင်တောင်, သင်အသုံးပြုခဲ့သောအရာကိုကျွမ်းကျင်မှုစာရင်းပြုစုနိုင်ပါတယ်. ဥပမာ, တချို့နေထိုင်-မှာ-အိမ်မှာမိခင်များသူတို့မိသားစုဘတ်ဂျက်ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းကြောင်းပြောနိုင်.
အများအပြားချပြီးရှောင်ကြဉ်ပါ “ပျော့ပျောင်းသောကျွမ်းကျင်မှု” သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များကိုအာရုံစိုက်မနေသင့်သည်ဟုဆိုလိုသည်. အစား, သငျသညျသင်ယူထားသောသင်လုပ်ခဲ့တယ်အမှုအရာသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်. သင်သည်ထိုထက်ပိုပါကကြိမ်၏စုံတွဲတစ်တွဲလုပ်ပေးပေမယ့်မနိုင်. ဥပမာ, သငျသညျဖြစ်ကြောင်းဟုရှောင်ရှား “ဖော်ရွေ”, သို့မဟုတ် “ပျြောရှငျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး”.
သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ., ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေး. ဥပမာ, သင်၏စောင့်ရှောက်မှုယူတဲ့ကျောင်းမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်လူငယ်ကလေးတွေဆုံးမသွန်သင်ပါလျှင်, သင်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မယ် “ဆရာမ” သို့မဟုတ် “ငယ်စဉ်ကလေးဘဝပညာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်”.
သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ထက်ပိုရှည်မဖြစ်သင့်2စာမကျြနှာ, သငျသညျအချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ပြီလျှင်ပင်. နောက်ဆုံးအသာပါဝင်သည် 15 သင့်ရဲ့အလုပ်အတွေ့အကြုံ၏နှစ်ပေါင်း.
သငျသညျသို့ရဖို့ကျော်ကြားသို့မဟုတ်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်တဲ့ကျောင်းကိုသှားလြှငျ, သင့်ရဲ့ရန်ကိုထည့်သွင်းဖို့သေချာအောင် “ပညာရေး” အပိုင်း.
စာရင်းအောင်မြင်မှုအဖြစ်အဘယ်အရာကိုသင့်အလုပ်များကိုခဲ့ကြသည်. သင်တစ်ဦးအထင်ကြီးစီမံကိန်းကိုအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ အကယ်., အဲဒီအကြောင်းအနည်းငယ်အသေးစိတ်ပေး. ဥပမာတစ်ခုသင်အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့စီမံကိန်းကအရမ်းစျေးကြီးသို့မဟုတ်ဘယ်မှာသင်သည်များစွာသောလူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ရတယ်ခဲ့လိမ့်မယ်.
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကိုယ်ရေးရာဇဝင် template ကို သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဖန်တီးရန်ကိုသုံးနိုင်သည်.
ကုမ္ပဏီများအလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်း filter မှကိုယ်ရေးရာဇဝင်ခြေရာခံခြင်းစနစ်များကိုအသုံးပြု. အများဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်, လူသားတစ်ဦးသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဖတ်ရှုခြင်းမဟုတ်ပါ. MostInstead, ကွန်ပျူတာသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက်စကားများအလုပ်ဖော်ပြချက်ကိုက်ညီလျှင်ကြည့်ဖို့ရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်. တစ်ဦးက posted အလုပ်ပုံမှန်အား applications များရာပေါင်းများစွာအားလက်ခံတွေ့ဆုံ.
သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကွန်ပျူတာအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်ကတည်းက, သင်အလုပ်တစ်ခု-တိကျတဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖန်တီးသေချာအောင်ရန်ရှိသည်. ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီအချိန်ကိုသင်လျှောက်ထားတာကိုဆိုလိုတယ်, သငျသညျအလုပျဖော်ပြချက်ကိုစစ်ဆေးကြောင့်ရန်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုက်ညီဖို့လိုတယ်. သို့သော်, အလုပ်တစ်ခုတိကျတဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အလုပ်ဖော်ပြချက်အနေဖြင့်တိုင်းစကားလုံးထည့်သွင်းရန်ရှိသည်ပါဘူး. သော့ချက်စာလုံးများကိုရှာဖွေ. သော့ချက်စာလုံးများကိုအများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်စကားလုံးတွေကိုနှင့်စာပိုဒ်တိုများဖြစ်ကြသည်. အတော်များများကသော့ချက်စာလုံးများအဆိုပါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေကြတယ် “လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှု” အပိုင်း. ဥပမာ, သင်တစ်ဦးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလက်ထောက်ဖြစ်ဖို့လျှောက်ထားလျှင်, သငျသညျစကားများကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းသတိထားမိ “ပုံစံတင်ပို့ရန်”, “ချိန်းအောင်”, နှင့် “စီစဉ်ခြင်း” အများကြီးကိုသုံးပါ.
တိကျတဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အလွန်ဆင်တူဓိပ်ပာယျနှငျ့အခွားသောစကားကိုစကားလုံးများကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ပါဝင်စေခြင်းငှါ, အလုပ်တစ်ခုရေးသားခြင်း. ဥပမာ, သင်ယခင်ကအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည့်အခါတစ်ဦး "အကြောင်းအရာစာရေးဆရာ" စလေိုကွောငျးအလုပ်လျှောက်ထားစေခြင်းငှါ "အကြောင်းအရာဖန်တီးသူ။ " နောက်ဥပမာထားသောစာပိုဒ်တိုများပြောင်းလဲနေတဲ့စေခြင်းငှါ “အသစ်အလုပျသမားမြားအဘို့အကြည့်ရှု” သို့ “ဝန်ထမ်းစုဆောင်း”.
ဤဖြစ်စဉ်ကိုအချိန်နှင့်အလေ့အကျင့်ကြာ. ဖွင့်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းအလုပ်ဖော်ပြချက်အထဲက print ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်. သင်ထင်စကားလုံးများကိုအရေးကြီးလှသည်နှင့်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်သို့သူတို့ကိုငါကိုထည့်သွင်းဖို့သေချာအောင်တချို့အချိန် ယူ. မီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်လည်းထင်ရှားစေ. ရိုးသားမှုကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသတိရပါ. သင်နှင့်အတူ exprience ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုကျွမ်းကျင်မှုမပါဝင်ပါနဲ့. ဤလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေက်ဘ်ဆိုက်ဟုခေါ်သည် jobscan.co. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့အလုပ်ဖော်ပြချက် upload နှငျ့သငျလုံလောကျပွဲရှိတယ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တွေ့နိုင်ပါသည်.
ကျနော်တို့ကဤကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကြံပေးချက်များကိုသင်ကူညီပေးခဲ့သည်မျှော်လင့်ပါတယ်. ယခုတွင်သင်သည်အလွန်ကြီးစွာသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်အောင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကြပြီ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အလုပ်အင်တာဗျူးအဘို့အဆင်သင့်ရရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်.